Caasha Maxamud Yusuf oo loo yaqaanno Caasha Luul waxay ka mid tahay haweenka Abwaanada Soomaalida ugu saameynta badan. Gabayadeeda caalamka ayaa laga aqoonsaday, sanadkii 2018-ka buug ay ka qortay Tahriibka ayaa Jaraa’idka Sunday Times u aqoonsaday inuu yahay buuga gabayga sanadka 2018.
Caasha Luul waxay Soomaaliya ka soo tagtay billowgii dagaalkii sokeeye sanadkii 1990-kii. Waxayna ilaa waaagaas ku nooleed caasimada London ee dalka Ingiriiska. Iyadoo isticmaaleysa qaabkii hore iyo qaab cusub ayey gabaygeeda waxay uga hadashaa mowduucyo badan sida colaadda, haweenka, nabadda, qurbaha iyo tahriibka. Arrimahaas oo dhamaan soo jiita dadka da’da yar iyo kuwa waaweyn, dal iyo dibad meesha ay joogaan.
Waxqabadkeeda waxay ku soo bandhigtaa talefashinada iyo barteeda gaarka ah ee Youtube-ka iyo baraha bulshada.
Gabayada Abwaanka oo idil Asha Mohamud Yusuf
Asha Mohamud Yusuf war dheeri ah